यो साता तपार्इको कसरी बित्छ दिन? हेर्नुहोस, साउन १२ देखि १८ गतेसम्मको राशिफल::mirmireonline.com
आ. व.: ०७४/०७५ | दर्ता न: १७८/०७३/०७४ | प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिम्सिना, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना | शनि, साउन ११, २०७६
मेष– उत्साह, उमंग बढेर जानेछ । घरबाहिरको सानो यात्राको योग पर्ने एवं काममा जिम्मेवारी थपिनाले व्यस्तता बढ्नेछ । दाजुभाइपक्षबाट सरसहयोग मिल्ने एवम स्वास्थ्यमा भने सामान्य समस्या देखापर्नेछ । साताको मध्यमा अनावश्यक चिन्ता थपिने एवं पारिवारिक तनाव बढ्नेछ । साताको अन्त्यमा भने अध्ययनमा सफलता मिल्ने एवं आम्दानीको स्तर बढ्नाले आँटेको काममा सफलता मिल्नेछ ।
वृष– धन सम्पत्तिको कारोबारमा सफलता मिल्ने एवं छरछिमेकबाट सहयोग पाइनेछ । भोजनको सुख मिल्ने एवं स्थान परिवर्तनको योग देखिन्छ । साथीभाइसँग रमाइलोमा खर्च हुने एवं प्रशन्नता बढ्नेछ । साताको अन्त्यमा भने विवाद बढ्ने मित्रता टुट्ने एवं आफ्ना मान्छेसँग कारोबार बिग्रिनेछ ।
मिथुन– खेलकुद एवं मनोरञ्जनमा लगाव लाग्नेछ । आँटेको काममा ढिलासुस्ती एवम शारीरिक चोटपटक लाग्नेछ । साताको मध्यमा भने व्यापार व्यवसायमा फाइदा, बोलीको प्रभावले काम बन्ने एवं कुटुम्ब सुख मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा भने छोटो यात्रा गर्नुपर्ने एवं नोकरी रोजगारीमा जिम्मेवारी थपिनाले तनाव बढ्नेछ ।
कर्कट– साताको शुरुमा पैसाको अभाव हुनेछ । अनावश्यक खर्च बढ्नाले आर्थिक तनाव बढ्नेछ । सरसामान हराउन सक्ने एवं यात्रामा ढिलासुस्ती हुनेछ । साताको मध्यमा भने शंकाले चिन्ता थपिने, बिसञ्चो बढ्ने एवं आलस्यताले काममा ढिलासुस्ती हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने आम्दानीको श्रोत भेटिने एवं सम्पतिको कारोबारमा लाभ मिल्नेछ ।
सिंह– पशु एवं चौपायाबाट फाइदा मिल्नेछ । खेती किसानीबाट आम्दानी बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा फाइदा हुनाले आर्थिक स्थिति मजबुत रहनेछ । साताको मध्यमा भने सामान्य क्षति हुने एवं शारिरीक समस्या आउनेछ । साताको अन्त्यमा भने अरुको लागि खर्च गर्नुपर्ने एवं सामाजिक क्षेत्रमा पहिचान र प्रतिष्ठा मिल्नेछ ।
कन्या– नयाँ कामको थालनी हुनेछ । काममा सहायता मिल्नाले फाइदा बढी देखिनेछ । राजनीतिक क्षेत्रबाट लाभ एवं ठूलाबडाको साथ मिल्नेछ । व्यापारमा वृद्धि हुनाले आर्थिृक भार कम हुनेछ । सुख सुविधा एवं भोग विलासमा मन जाने एवं मातृपक्षबाट सहयोग मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा भने काममा क्षति हुने, घाटा बेहोर्नुपर्ने एवं नमिठो खबर मिल्न सक्नेछ । आलोचना बढ्नाले काम गर्ने मनस्थिति कमजोर हुनेछ ।
तुला– धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रमा लगाव जानेछ । धर्म कर्ममा रुचि एवं सामाजिक क्षेत्रमा पहिचान बन्नेछ । वैदेशिक कामबाट फाइदा एवं नोकरी रोजगारीको अवसर मिल्नेछ । काममा प्रशंसा मिल्ने एवं आँटेको काममा फाइदा हुनाले आर्थिक क्षेत्र बलियो हुनेछ । व्यापार बढ्ने तथा धनसम्पतिको सहयोग मिल्नाले पुरानो एवम अधुरो काम पूरा हुनेछ ।
वृश्चिक– स्वास्थ्यमा सामान्य गडबडी हुनेछ । काममा तनाव एवं पारिवारीक समस्या आउनेछ । साताको मध्यमा भने यात्रा हुने एवं पारिवारीक भेटघाट रहनेछ । दिनले साथ दिनाले काममा प्रगति देखिन्छ । साताको अन्त्यमा भने मानसम्मान बढ्ने एवम सरकारी क्षेत्रमा पहुँच मिल्नेछ ।
धनु– प्रेममा प्रगति देखिन्छ । वैवाहिक सुख मिल्ने एवं पारिवारिक मेलमिलाप हुनेछ । साताको मध्यमा भने आलोचना हुने, कसैले फसाउन सक्ने एवं काम अधुरो रहनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउनाले खर्च बढ्ने एवं सञ्चित धन कम हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने धर्म कर्म एवं तीर्थ ब्रतमा मन जाने तथा दान धर्म पुण्यमा खर्च हुनेछ ।
मकर– खेलकुद एवं प्रतिस्पर्धामा जित हुनेछ । अधुरा काम बन्ने एवं वैदेशिक कामबाट फाइदा मिल्नेछ । मुद्दा मामिला किनारा लाग्ने एवं विरोधी पक्षको भय हट्नेछ । साताको मध्यमा भने साझेदारीमा फाइदा एवं सेयर कारोबारमा राहत मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा भने स्वास्थ्यमा समस्या आउने एवं प्रियजनको कारणले तनाव बढ्नेछ ।
कुम्भ– सन्तानले सहयोग गर्नेछन् । कला, संगीतमा रुचि जाने एवं व्यापार व्यवसाय फस्टाउनेछ । शत्रुको भय हट्ने एवं प्रतिस्पर्धात्मक काममा जित आफ्नो हुनेछ । आँटेको कुरा ढिलो पूरा हुने एवं आफन्तसँग मनमुटाव रहनेछ । साताको अन्त्यमा भने पारिवारिक स्वास्थ्यमा समस्या आउने एवं दाम्पत्य जीवनमा मनमुटाव बढ्नेछ ।
मीन– घरायसी कारोबारमा उल्झन आउनेछ । आपसी समझदारी नबन्नाले काम लम्बेर जानेछ । साताको मध्यमा भने विद्याध्ययनमा प्रगति एवं सन्तानको सुख मिल्नेछ । आम्दानीको स्तर बढ्नाले पुराना कामको तनाव घट्नेछ । कला, संगीतमा रुचि जाने एवं अरुको सहयोग मिल्नेछ । आकस्मिक धन लाभ हुने तथा साथी भाइको सहयोगले काम छिटो पूरा हुनेछ ।
शनि, साउन ११, २०७६ मा प्रकाशित